एउटै कम्पनीको साढे २ करोडको सेयर कसका नाममा किन्यो दिव्याले ?
हाल ५० ब्रोकर कम्पनीहरुले संयूक्त रुपमा सरदर दैनिक १ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार गर्ने गरेका छन्। यस हिसावले एउटा ब्रोकर कम्पनीले सरदर दैनिक जम्मा २ करोडको सेयर किनबेच गर्ने गर्दछ, त्यो कारोबारमा झण्डै डेढ सय कम्पनीहरु जोडिएका हुन्छन्।
तर बिहीबार एउटै ब्रोकर नम्वर ५९ दिव्या सेक्युरिटिजले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको मात्रै साढे २ करोड रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको छ।
प्रतिकित्ता २८ सयभन्दा बढी मूल्य रहेको प्राइम लाइफको एउटै कम्पनीले ८ हजार ९ सय ७१ कित्ता अर्थात कुल २ करोड ५४ लाख ६४ हजार ६७० रुपैयाँको सेयर विभिन्न लगानीकर्ताको लागि खरिद गरिदिएको हो।
रोचकको अर्को कुरा के छ भने, सो कम्पनीको बिहीबार भएको कुल कारोबारमा दिव्याले मात्रै आधा रकमको सेयर खरिद गरेको छ। प्राइम लाइफको यस दिन कुल ५ करोड १९ लाखको सेयर किनबेच भएकोमा दिव्याले मात्रै २ करोड ५४ लाखको खरिद गरेको हो।
बिमा कम्पनीहरुको बजार मूल्य अत्याधिक बढेका बेला एउटै ब्रोकरले एउटै बिमा कम्पनीको आधा सेयर उठाएपछि कतिपय लगानीकर्ता भने शसंकित बनेका छन्।
मिलेमतोमा बजारमा अभाव गराउने उद्देश्यले एउटै कम्पनीको यति ठूलो रकमको सेयर एक ब्रोकरमार्फत उठाइएको कतिपयको आरोप छ।
यस सम्वन्धमा दिव्या सेक्युरिटिजले भने एउटै लगानीकर्ताको नाममा नभई विभिन्न लगानीकर्ताको नाममा खरिद भएको जनाएको छ।
कम्पनीका संचालक रामप्रसाद आचार्यले धेरै थरिका व्यक्तिले विभिन्न आशामा सेयर किनेको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘कम्पनीको ३ वर्षको साधारणसभा एकै पटक बस्ने चर्चा चलेकाले लगानीकर्ताले धेरै आशा गरेका हुन सक्छन्’ उनले भने।
जीवन बिमा कम्पनीहरुले आगामी असार मसान्तसम्म २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था नियामकले गरेको छ। जसका लागि कम्पनीहरुले हकप्रद र बोनसको आशा गरेका छन्। प्राइम लाइफको हालको चुक्ता पुँजी जम्मा ४८ करोड ८१ लाख मात्रै छ। उसले आगामी असार मसान्तसम्म २ अर्ब पुर्याउनुपर्दछ। यसका लागि हकप्रद वा बोनसको विकल्प छैन।
तीन वर्षदेखि साधारणसभा बस्न नसकेकाले कम्पनीले बिमा समितिसमक्ष पुँजी वृद्धि योजना समेत बुझाएको छैन। बजारमा सूचीकृत जीवन बिमा कम्पनीमध्ये सेयर संख्या सबैभन्दा कम रहेकोमा यो कम्पनी पर्दछ। जसले गर्दा लगानीकर्तामा आशंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन्।
एकै दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँले बढेको छ। समग्र बिमा समूह १६० अंकले घट्दा सो कम्पनीको मूल्यमा भने ठूलै वृद्धि देखिएको छ।
कस्तो छ प्राइम लाइफ ?
प्राइम लाइफको अहिलेको बजार मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। प्रतिकित्ता २८९५ रुपैयाँसम्म उसको बिहीबार सेयर किनबेच भएको छ। गत फागुनमा कम्पनीको मूल्य न्यूनतम ११७० रुपैयाँसम्म झरेको थियो।
वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने कम्पनीले तेस्रो त्रैमाससम्म १० करोड ७४ लाख खुद नाफा कमाएको छ। जुन सामान्य हो। कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा २९ रुपैयाँ ३५ पैसा छ। उसको मूल्य आम्दानी अनुपात केलाउने भने प्रतिफलका लागि कम्पनीको सेयर अत्याधिक महँगो हुन जान्छ।
अहिलेको बजार मूल्य र प्रतिसेयर आम्दानी हेर्दा मूल्य आम्दानी अनुपात ९८ हुन्छ। जुन बिमा कम्पनीहरुमा निकै उच्च हो। यसले लगानीअनुसारको प्रतिफल नरहेको स्पष्ट पार्दछ। प्रतिसेयर नेटवर्थ जम्मा २६५ छ।
अर्कोतर्फ कम्पनीले जसरी चुक्ता पुँजी बढाए पनि त्यसले प्रतिसेयर आम्दानीलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्नेछ। जसले गर्दा साना लगानीकर्ता फँस्न सक्नेतर्फ आफै सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने नियामकले पनि दैनिकजसो बजारको कारोबारलाई अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १२, २०७४, ०५:३३:४९